धर्म दर्शन Archives - itaharinews
घर घरमा तुलसीको बिरुवा रोपेर हरिशयनी एकादशी मनाइँदै !
काठमाडौँ। प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घर घरमा तुलसीको बिरुवा सारि चार महिनासम्म गरिने विशेष पूजा आराधना आजदेखि शुरु हुँदैछ। एक महिनाअघि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिनमा घर घरको तुलसी मोठमा राखिएको दलको बिरुवा आज मोठमा सारिन्छ। सनातन वैदिक परम्पराअनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रुपमा मानिन्छ। आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा हुन्छ। आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक...
धरान । कोरोना महामारी कायमै रही रहेको भन्दै प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी राखेको बेलामा पनि धरान–१४ विजयपुरमा रहेको पिण्डेश्वर मन्दिरमा बोल बम भक्तजनहरू गेटमानै जल चढाएर फर्केका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जारी गरेको निषेधाज्ञामा मन्दिरहरूमा नियमित नित्यानौमित्या पूजापाठ मात्र गर्न पाउने भनिए पनि आज पिण्डेश्वर मन्दिरमा टाढा टाढाबाट गेरुबस्त्रधारी बोलबंम भक्तजन मन्दिर आइपुगेका छन् । वि...
बलात्कार आरोपी कृष्णदास सुनसरी प्रहरीको नियन्त्रणमा !
सुनसरी,१६ मसिंर । सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई एम्बुलेन्समा हालेर जिल्ला प्ररी ल्याईएको हो । विरामीको नाटक गर्दै अस्पताल नै बस्न थाले पछि प्ररीले उम्बुलेन्समा चडाएर प्ररी कार्यलय ल्याईएको हो । । उनलाई बिहान ५ बजे बिराटनगरस्थित बिराट नर्सिङ होमबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी बिनोद शर्मा पुस्टि गर्नु भएको छ । उनलाई आइतबार दिउसो हर्ट अट्य...
आज दशैंको पाँचौं दिन (स्कन्दमाताको पूजा गरिँदै )
काठमाडौं । आज बडादशैंको पाँचौं दिन । हिन्दूधर्मालम्बीहरूले पाँचौं देवी स्कन्दमाताको पूजा–आराधना गरेर मनाउँदै छन् । नवदूर्गामध्येकी पाँचौं देवीलाई स्कन्दमाताको नामबाट चिन्ने गरिएको छ । भगवान् कार्तिकेयको एक नाम स्कन्द पनि हो । जो ज्ञानशक्ति र कर्मशक्तिको सूचक थिए । त्यस्तै ज्ञानशक्ति र कर्मशक्तिको देवी स्वरुपलाई स्कन्दमाता नामले चिन्ने गरिएको हो । स्कन्दमाता यस्ती दैवी शक्ति हुन् जसले व्यवहारिक ...
नवरात्री चौथो दिन स् आज कुष्माण्डा देवीको पूजा तथा आराधना गरिँदै !
आश्विन शुक्ल चतुर्थी तिथि अर्थात आजकै दिन शक्तिपीठ, देवीमन्दिर तथा घरघरका पूजाकोठाहरुमा देवीभवानी कुष्माण्डा माताको पूजा आराधना गरिन्छ । । सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा व्याप्त सबै जीवित तथा निर्जीव तत्व यिनै देवीकै कृपाले उत्पन्न भएको हो भन्ने पौराणिक मान्यता रहेको छ । कुष्माण्डा मातालाई शुभकर्म थालनी वा सृष्टिको प्रतीकको रुपमा पूजा गरिन्छ । आफ्नो बलले अण्ड यानी ब्रह्माण्ड उत्पन्न गरेकोले यी देवीको ना...
दशैंको टीकाको उत्तम साइत १० बजेर ३५ मिनेटमा !
काठमाडौं । दशैंको टीकाको उत्तम साइत बिहान १० बजेर ३५ मिनेटमा रहेको नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले जनाएको छ । यस वर्षको दशैंको टीका असोज २१ गते मंगलबार परेको छ । नेपाल पञ्चांग निर्णायकसमितिका अध्यक्ष प्रा। डा। रामचन्द्र गौतमले साइत नै खोजेर दशैंको टीका लगाउनेका लागि विजयादशमीको दिन बिहान १०ः३५ बजेको समय उत्तम रहेको बताए । यद्यपि दशैंको टीकालाई देवी भगवतीको प्रसादको रुपमा लिइने हुँदा दिनभरी पन...
पाहाडमा नयाँ जनै फर्ने र तराईमा रक्षावन्धन बाध्ने किन ?
काठमाडौं । साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन चूडाकर्म गरेका तागाधारीले मन्त्रणा गरिएको नयाँ जनै फर्ने र अन्यले नाडीमा रक्षावन्धन बाँध्दैछन् । तराई क्षेत्रमा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई ‘राखी’ बाँधेर यो पर्व मनाउँदैछन् । जनैको छ शिखालाई ज्ञान, कर्म र उपासना तथा ब्रह्मा, विष्णु महेश्वरको प्रतीक मानिन्छ । सक्नेले सबै पूर्णिमामा वा नसक्नेले वर्षको एक पटक मन्त्रणा गरिएको जनै लगाउँदा राम्रो हुन्छ भनिएको छ । ज...
ऋणबाट मुक्त हुन् चाहनुहुन्छ ? जोतिषका यी उपाय अप्नाउनुहोस् !
एजेन्सी । अधिकांश मानिसले आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्नका लागि ऋण लिने गर्दछन्। उधारो तथा ल्याएको ऋण तिर्न नसके जीवनमा निकै तनाव खेप्नु पर्ने हुन्छ। ऋणको दलदलमा फसेका व्यक्तिलाई बाहिर निस्कन निकै कठिन हुन सक्छ । जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा ऋणको दोष हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले उधारो तथा ल्याएको ऋण तिर्न नसक्दा निकै समस्या खेप्नु पर्ने हुन्छ । ज्योतिष मनिष शर्माले कुण्डलीमा भएको ऋण दोष हटाउने निम्न उपायका बता...
उद्योग खोल्न स्थानीय तहको चासो !
तेह्रथुम । जिल्लाका स्थानीय तहले दुग्ध प्रशोधन उद्योग खोल्न चासो देखाएका छन् । विभिन्न स्थानमा उत्पादित दूध प्रशोधन गर्ने उद्योग सञ्चालन गरेर किसानलाई सहयोग गर्न जिल्लाका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहमत भएका हुन् । कतिपय स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षमा दुग्ध प्रशोधन उद्योगका लागि बजेट विनियोजन समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालले म्याङलुङमा आयोजना गरेको ‘सहकारीमा प्रभावकारी दूध आपूर्...
तपाइँको घरमा यी ६ चिज छन्रु त्यसो भए सधै‌ सुख र समृद्धि तपाइँको साथमा छ !
जेन्सी। घरमा सुख–समृद्धि भइरहोस भन्ने सबैको चाहना हुन्छ । त्यसकालागि शास्त्रमा केही उपाय पनि बताइएको छ । महाभारत कालमा युधिष्ठिरले श्रीकृष्णसँग घरमा सधैं सुख–समृद्धि भइराख्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दै प्रश्न गरे । जवाफमा श्रीकृष्णले केही यस्ता चिज हुन्छन् जसलाई सधैं घरमा राख्नुपर्छ । जुन घरमा यस्ता चीज हुन्छन् त्यस्ता घरमा सधैं सुख र समृद्धि भइराख्छ । घ्यू घरको मन्दिरमा गाईको घ्यूबाट दियो बाल्नुपर्...